Cameroon: doorashooyinka sharci dejinta iyo dowladaha hoose ee loo cayimay 9 Febraayo 2020 - JeuneAfrique.com - KU SAMEE
ACCUEIL » SIYAASADDA »Cameroon: doorashooyinka sharci dejinta iyo dowladaha hoose ee goaamiyay 9 Febraayo 2020 - JeuneAfrique.com
Madaxweynaha Paul Biya wuxuu u yeeray axada 10 November ee guddiga doorashada, iyadoo la eegayo doorashooyinka soo socda ee deegaanka ee loo cayimay 9 Febraayo 2020. In kabadan hal sano doorashada madaxweynaha kadib, codbixiyayaashan ayaa noqon doona kuwa go’aan ah.
Majiraan warbixin cusub. Qoraal uu maanta oo Axad ah ka akhriyey barnaamijyada raadiyaha qaranka ee Cameroon, Paul Biya wuxuu ku dhammaaday shakiga isaga oo isugu yeeray guddiga doorashada doorashooyinka guud iyo kuwa dowladda hoose ee soo socota. Qoraalka ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu yiri "guddiga doorashada waxaa la shirey Axadda 9 Febraayo 2020 si loo sii wado doorashada ku-xigeennada iyo golayaasha degmooyinka."
ka dib laba warbixin oo isku xigta, doorashooyinka maxalliga ahi waa inay dhammaystiraan hawsha cusboonaysiinta siyaasiyiinta reer Cameroon ee ku hawlanaa bishii Oktoobar 2018 oo la socota madaxweynaha. Doorashadii dhamaadka taas oo madaxweyne Biya loosiiday guuleyste iyadoo leh 71%, laakiin natiijooyinkiisa wali ay u tartameen Maurice Kamto, ayaa si rasmi ah kaalinta labaad ugu galay 14% codbixinta.
Shaki ku saabsan gobollada ku hadla Ingiriisiga
Doorashooyinka maxalliga ah ayaa markaa suurtagal ka dhigaya suurtagalnimada in la qiimeeyo horumarka ka soo baxay Dhaqdhaqaaqa Renaissance ee Cameroon (MRC) Waxaa lagu arkay doorashooyin gaar ah xilligii doorashada madaxweynaha. Jilayaasha xisbigan siyaasiga ah ayaa durba bilaabay olole ay ku abaabulayaan codbixiyayaasheeda, sifiican ka hor shirweynaha doorashada.
Hase yeeshe, shaki ayaa ku jira, sida dhabta ah ee codbixinta loogu hayo gobollada ku hadla Ingiriisiga. Halka Xaaladda nabadgelyadu way kacsan tahayDhowr xubnood oo mucaaradka ah ayaa ku baaqay in la hirgaliyo tillaabooyinka la qaatay dhamaadka wadahadalka ugu weyn ee qaran si loo soo afjaro dhibaatada, ka hor doorashada cusub.
Kalfadhigii ugu dambeeyay baarlamaanka ee hadda jira ee sharci dejinta laga bilaabo Noofembar 12, ansaxinta tillaabooyinka cabashada ka dhanka ah xagjiriinta Anglo waxay noqon kartaa ajandaha, si loogu oggolaado qabashada xasilloonida ee doorashooyinka maxalliga ah. goboladaas.
Guinea-Bissau: Jomav, waa madaxweynaha kaligiis ka soo horjeedda dhammaan - JeuneAfrique.com